Guddoomiyaha Baarlamanka, Jawaari iyo Aadan Madoobe Oo Go’aano kasoo Saaray Doorashada Koofur Galbeed.(Sawiro) – Heemaal News Network
Guddoomiyaha Baarlamanka, Jawaari iyo Aadan Madoobe Oo Go’aano kasoo Saaray Doorashada Koofur Galbeed.(Sawiro)
Waxaa maanta xarunta Villa Hargeysa kulan xasaasi ah ku yeeshay Gudoomiyaha Golaha Shacabka, Xildhibaano iyo Wasiiro kasoo jeeda deegaanada Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Kulanka ka dhacay Villa Hargeysa waxaa kamid ahaa xubnihii kasoo qeyb galay Gudoomiyaashii hore ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo Sheekh Aadan Madoobe.
Sida aan wararka ku helnay kulankan ayaa ahaa mid looga arinsanayay doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo marar badan dib u dhac ku yimid iyo faragalinta la sheegay in dowlada Federaalka ku heyso doorashada.
Xildhibaanada iyo xubnihii kale ee kulanka ka qeyb galay ayaa Gudoomiyaha golaha Shacabka Maxamed Mursal ku dhaliilay in uusan door muuqda ku laheyn masiirka umada uu matalo ee Koonfur Galbeed ayna xaqiraad ku sameeyeen Madaxda kale ee dalka.
Qaar kamid ah Xildhibaanadii kulanka ka hadlay ayaa dowlada Federaalka ku dhaliilay in faragalin ku hayaan doorashada ayna lakala safanayaan Musharaxiinta, waxa ay sidoo kale Xildhibaanada kasoo horjeesteen ciidanka Baydhabo la geeyay.
Gudoomiyaha Golaha Shacabka iyo xubnihii kale ee ka qeyb galay kulanka Villa Hargeysa ayaa go’aamiyay in dowlada Federaalka faragalinta ka dhaafto doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Waxa ay sidoo kale xubnahan go’aamiyeen in aysan jiri doonin cid gaar ah oo laga hor istaagayo doorashada ka dhaceysa magaalada Baydhabo, waxa ayna kasoo horjeesteen ciidamadii dhawaan la geeyay Baydhabo.
Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay in ay faragalin ku hyeyso doorashada Koonfur Galbeed ayna wadato musharax gaar ah, waxaa sidoo kale dowlada lagu eedeeyay in ay dooneyso Mukhtaar Roobow doorashada kahor istaagto.
Madaxwaynaha Puntland Oo Degmada Taleex U Magacaabay Gobol.(Akhriso)
Gudoomiyaha Aqalka Sare Oo Kismaayo Kula Kulmay Madaxwaynaha Jubbaland.(Sawiro)
Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare Cabdi Xashi Cabdillaahi ayaa magacaabay guddi billaabaya xalinta khilaafka u dhaxeeya madaxda Dowladda, si gaar ahna madaxweyne Farmaajo iyo guddoomiyaha Golaha Shacabka. Guddiga ayaa ka kooban 7 Xubnood oo laga soo […]
Ciidanka nabad sugida iyo sirdoonka Qaranka ee NISA ayaa sheegay iney Muqdisho qabteen xubin ka tirsan Al-shabaab oo diyaarinayey qaraxyo. Qoraal kooban oo la soo dhigay barta NISA ay ku leedahay twitterka ayaa lagu sheegay […]
Ugu yaraan Labo qof yaa ku dhaawacmay gelinkii dambe ee maanta kadib markii gaari yar oo waxyaalaha qarxa lagu soo xirey uu ku qarxay agagaarka koontaroolkii hore ee Afgooye. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in […]